Saturday June 25, 2016 - 22:11:42 in Articles by Super Admin
10-13 Ka July Odey dhaqameedyada waxay diyaarinayaan liiska ergooyinka cod bixiyeyaasha ayagoo tix gelinaya kuraasta sida gaarka ah loogu asteeyay ee loo qoondeeyay haweenka iyadoo la raacayo habka ay ogolaatay Madasha Hogaanka Qaran (ugu yaraan 30% Aqalka Hoose). Odayaasha Dhaqanka.
10-ka July Dejinta habraac iyo arrimo farsamo (oo ay ka midyihiin shuruudaha murashaxmimada, diiwaangelinta murashaxiinta,
xarumaha codbixinta, waraaqaha codeynta, kormeerka doorashada, wacyigelinta dadweynaha iyo ololaha).
Liiska faahfaahsan ee 30% kuraasta qoondada haweenka • Arrimaha kale ee la ogaado una baahan ka doodidda/go’aanka Madasha Hoggaanka Qaran. MHQ LUULYO (Ramadaan/ Ciid) 1-16-ka July Soo xulidda ergooyinka doorashada Odayaasha Dhaqanka.
16ka July Soo gudbinta iyo hubinta liiska kama dambeeysta ah ee ergooyinka Odayaasha Dhaqanka Iyo GDGHDD.
16-19 ka July: Daabacidda waraaqaha codeynta Aqalka Sare iyo ogolaansho la siiyo goobjoogayaasha hanaanka codeynta iyo tirinta codadka. Baralamaanada Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka.
20-ka July: Codeynta Aqalka Sare (oo hal maalin kawada dhacaysa dalka), oo ay ku xigto tirinta iyo isu geynta codadka, ansaxinta iyo ku dhawaaqidda natiijada iyo saxiixidda liiska rasmiga ah ee xubnaha la doortay ee Aqalka Sare. Baralamaanada Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka.
27 July: Doorashada godoonka aqalka sare ee baarlamaanka Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
GFHDD 7-12-ka August: Imaanshaha iyo Wacyigelinta ergooyinka codeynaya , soo jeedinta khudbadaha murashaxiinta u tartamaya Aqalka Hoose ee Barlamaanka.
U codeynta Aqalka Hoose (oo isla maalin ka dhacda dhammaan goobaha, haddii loo baahdana la sii wado dhowr maalmood), oo ay ku xigto tirinta iyo isu geynta codadka, ansaxinta iyo ku dhawaaqidda natiijada iyo saxiixidda liiska rasmiga ah ee xubnaha la doortay ee Aqalka Hoose. Liiska kama danbaysta ah ee Xildhibaanada Aqalka hoose oo lagu dhawaaqo. Fadhiga ugu horeeya ee lagu dhaarinaayo xildhibaanada aqalka hoose oo qabsooma. GDGHDD iyo GFHDD oo midba shaqada uga jira halka uu ka leeyahay